'Qof kasta oo Soomaaliya ku dhinta wuxuu u geeriyooday Fayraska Corona' - Jigjiga Online
HomeSomalida‘Qof kasta oo Soomaaliya ku dhinta wuxuu u geeriyooday Fayraska Corona’
Muqdisho (JO) –
Mas;uuliyiinta Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in qof kasta oo dalka gudihiisa ku dhinta ay aaminsan yihiin inuu u geeriyooday cudurka coronavirus.
Wasiirka Warfaafinta ee Xukuumadda Federaalka, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa shir jaraa’id oo uu shalay qabtay ku sheegay in fayraska uu si baaxad leh ugu fiday Soomaaliya.
“Xanuunkan khatarta ah Soomaaliya wuu soo gaaray, magaalada Muqdisho ayuu hadda ugu saameyn badan yahay, laakiin wuu fidayaa, gobollada dalkana wuu ku faafayaa,” ayuu yiri Wasiir Maareeye.
Wuxuu Wasiirku sheegay in dowladda Soomaaliya ay aaminsan tahay in qof walba oo xilligan Soomaaliya ku dhintay uu u geeriyooday coronavirus.
“Qof kasta wuxuu dhahayaa malaariyo ayaa i heysa, ama waxaa la leeyahay qofkaas wuxuu u dhintay malaariyo, cagaarshor – waxaasoo dhan waxba kama jiraan – dowladda Soomaaliya qof kasta oo maanta dhinta waxay u aqoonsan tahay inuu coronavirus dilay, maadaama uu majority (cudurka ugu bada) yahay. Marka ogaada qof kasta oo dhintay waxaan u aqoonsan nahay inuu coronavirus dilay, markii uu cudurkan naga baxo halkii caadiga ahayd halagu noqdo”, ayuu yiri Wasiir Maareeye.
Dhanka kale wuxuu shacabka ku boorriyay inay kaalintooda ka qaataan sidii cudrkan looga badbaadin lahaa Soomaaliya.
“Walaalayaal xanuunkan daaweyn toos ah maleh – sida ay dhakhaatiirtu sheegeen – daaweyntuusy waa inaad taxadarto oo xanuunka aad ka badbaadiso naftaada, qoyskaaga, ehelkaaga iyo shacabka Soomaaliyeed. Siyaabaha looga badbaadi karo aad bay u sheegeen dowladda Soomaaliya iyo dhakhaatiirtuba, wasaaradda caafimaadkana u sheegtay. Waxaa ugu horreeya inaad maaskaraati xirato mar kasta oo aad meel dadku ku badan yahay tageyso, inaadan dadka salaamin, inaadan hab siinin, inaadan ku quficin ama ku hindhisin,” ayuu yiri.
Ma aha markii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliya ay walaac ka muujiso heerka ay gaartay dhibaatada Covid-19.
La taliyaha nidaamka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya, Cabdirisaaq Yuusuf Axmed ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay sheegay in saameynta ay aad u ballaaran tahay, dowladduna aysan awood u heli karin inay si buuxda ula tacaasho.
“Soomaaliya heerka dhimashada aad buu u sarreeyaa, waxaana sabab u ah nidaamka iyo system-ka caafimaadkeenna oo la ogyahay inuu liito iyo dadkeenna oo aad uga madax adeygay inay wacyigalinta iyo ka hortagga qaataan, sidoo kale waxaa yar awoodda baarista, waxaan aaminsan nahay inuu cudurku aad ugu jiro dalka oo dhan, gaar ahaan magaalada Muqdisho, oo aysan awooddeenna gaarin in ruux walba ama guri walba la baaro,” ayuu yiri.
Dr Cabdirisaaq wuxuu walaac weyn ka muujiyay heerka uu Soomaaliya ka gaaray faafitaanka cudurka Covid-19.
Tan iyo Markii uu cudurka gaaray Soomaaliya waxaa aad usii kordheysay tirada uu ku dhacayo.
Xogtii ugu dambeysay ee Wasaaradda Caafimaadka
Wasaaradda caafimaadka Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixinteeda maalinlaha ah ee Feyruska Karoona Khamiistii ku xaqiijisay in la diiwaan geliyay 19 xaalado cusub oo COVID-19 ah oo 13 kamid ah ay rag yihiin 6-na ay haween yihiin. 11 qofood oo cusub ayaa ka bogsooday xanuunka.
18 kamid ah bukaannada cusub waxaa laga diiwaan geliyay gobalka Banaadir, hal bukaanna Koonfur Galbeed.
Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay waxey gaartay 601, waxaana guud ahaan ka bogsooday 31 Ruux. 28 ruux ayaa dalka ugu geeriyootay cudurkaan.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa mawaadiniinta Soomaaliyeed ugu baaqday inay qaataan talooyinka caafimaad iyo amarrada dowladda ee qaybta ka ah qorshaha xakameynta faafitaanka Feyryska Karoona.
Qaar ka mid ah culimada Soomaalida ayaa sheegay tallaabooyinka loo qaadayo xakameynta cudurka ay ka mid tahay in la joojin karo jameecada masaajidyada.
Hase ahaatee waxaa wali lagu tukadaa masaajidyada magaalada Muqdisho, inkastoo qaarkood ay hirgaliyeen talooyinka kala fogaanshaha iyo isticmaalka maaskarada.
Sheikh cali Maxamuud Xasan(Cali wajiis), oo ah Xoghayaha guud ee Majmaca Culimada Soomaaliyeed, ayaa caddeeyay inaysan waajib aheyn in masaajidda lagu tukado xilliyada ay jiraan cudurrada faafa, waxuuna ku baaqay in salaadaha sunnada ah xaafadaha lagu dukado.
“Masaajidda inaan la imaanin asal ahaanba, oo guryaha lagu tukado ruqso ayaa loo heystaa, waa inaad arrintaas ogaataan. Muslimiintu marka ay cudurradaan oo kale yimaadaan waligood ma aysan dhihin masaajidda hala xiro – laakiin waa laga tagi jiray dhammaan masaajidyada”, ayuu yiri Sheekh Cali Wajiis.
Dawladda Turkiga Oo Shaacisay Waddanka Taageera Ururka Argagixisada Al-Shabaab